Tranonkala sôsialy shinoa miampanga ny Fetiben’ny fihinanana hena alika ao Yulin · Global Voices teny Malagasy
Tranonkala sôsialy shinoa miampanga ny Fetiben'ny fihinanana hena alika ao Yulin
Nandika (fr) i Melinda Legendre
Voadika ny 30 Jona 2020 6:42 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, Português, polski, Deutsch, বাংলা, Italiano, English
[Lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 25 Jona 2013. Mitondra mankany amina pejy amin'ny fiteny anglisy daholo ny rohy.]
Niteraka fampiakarampeo mafy tety anaty tambajotra, tonga hatramin'ny fanaovana antso hanaovana ankivy ilay hetsika, ny fetibe fanao isantaona atokana ho an'ny hena alika ao Yulina, faritanin'i Guangxi, atsimo-andrefan'i Shina, izay nisokatra ny 21 Jona 2013.
Herinandro maro talohan'ny “karnivalin'ny hainahandro”, fotoana iray izay amonoana alika an'arivony mba ho atao sakafo any amin'ireo trano fisakafoanana manerana ny tanàna, dia tamim-panantenana ireo mpikatroka ho an'ny zon'ny biby sy ireo mpitia biby no nandefa antso tao amin'ny pejin'ny Trano Fotsy ao Etazonia, mba hampitsaharana ireo hetsika firavoravoana manodidina ny fihinanana hena alika. Tsy nahomby ilay hetsika, tsy nahavita nanangona sonia 100.000 akory, izay fetra hahazoana valiny ofisialy.
Ho an'ireo mponina ao amin'ity tanàna ahitàna olona 6 tapitrisa ity dia fetibe firavoravoana ny fombandrazana mitavana hena alika rehefa tonga ny fisarahantaona amin'ny fahavaratra. Laza izay voafaritra tsara ao anatin'ny ohabolana iray ao amin'io faritra io : “Mahery loatra ny fofon'ny hena alika ka na andriamanitra aza tsy mahatohitra ela”. Inoan'ireo mponina ao an-toerana ho mitondra hery sy tanjaka io sakafo io.
Alika hotetehina ho andrahoina ao Yulin ( Open Source)
Nisy ezaka maro, tany aloha tany, nahazoana vokatra tamin'ny fandraràna ny fihinanana hena alika. Tamin'ny 2011, nisy fanentanana iray nanery ny governemantam-paritra hanafoana azy io, izay fombandrazana fihinanana hena alika efa nisy hatramin'ny 600 taona tao an-tananan'i Jinhu, faritany atsimo ao Zhejiang. Kanefa ,ho an'i Yulin dia zara raha misy fiovàna tsinjo eny am-paravodilanitra. Ao an-tanàna, heverina ho 10.000 ireo alika vonoina isantaona mandritra io fetibe io. Misy amin'izy ireny no voadarodaroka mandrapaha-tapitry ny ainy, na volosana velona sy andrahoina eo an-toerany eo ka nandrehitra ny hafanampon'ireo vondrona mpiaro biby, mandà ny fomba tahaka izao izay lazain'izy ireo ho tsy araka ny maha-olona no sady zavadoza.
Lazain'ireo lahatsoratra anaty gazety ihany koa fa marobe ireo alika mpirenireny na nalaina an-kery tamin'ny tompony, ary ny hita mahazatra dia afatratra anaty toerana tery izy ireny, izay toerana mora iparitahan'ny aretina eo amin'ireo alika mifangaro ao.
Marobe ireo mpampiasa aterineto no naneho ny rikorikon'izy ireo manoloana ity fomba fanao ity, saingy miaro fatratra ny fombany sy ny kolontsainy amin'ny fihinanana hena alika ireo olona ao an-toerana. “Fahazarana ara-tsakafo eo anivon'ny fiarahamonina ny mihinana hena alika, tsy voararan'ny lalàna ary tsy misy idiran'ny fitondrantena mihitsy“, hoy ny nambaran’ny mponina iray raha niresaka tamin'ny masoivohom-baovao ofisialy Xinhua.
Miditra anaty vanimpotoana vaovao ny fifamaliana mavaivay ety anaty aterineto momba ny fihinanana hena alika : miha-maro ry zareo Shinoa no manana biby atao namana an-tokantrano. Mitombo eny anivon'ny vahoaka ny fahatsapantena momba ny zon'ny biby.
Yang Yiyan nitoloko tao amin'ny Sina Weibo :
Tsy ilaintsika ny fomba fanao sy ny kolontsaina mirefarefa sy tsy mendrika eto an-toerana tahaka izao ! Tohanako mafy ny fanafoanana [ny fetibe fihinanana hena alika ao Lizhi] any Guangxi Yulin !!
Nampiàko io fihetsehampo io ihany koa, Zhang Kexin nanoratra hoe :
今天，2013年6月21日，广西玉林将举办“荔枝狗肉节”；届时，大批的狗在遭受苦难后将被 “活”杀！成为当地人的美食…；我们做了？我们什么也没有做？ 文明、道德、善良、生命价值观离我们近了？还是远了？ 但是，我们将永远记住——一个杀戮和血腥的日子和一个罪恶的城市！！
Androany 21 Jona 2013, hanao ny “fetiben'ny fihinanana hena alika ao Lizhi” ny ao Yulin any Guangxi. Ho marobe tokoa ireo alika ho ampijaliana sy hovonoina amin'izany ! Ho lasa sakafon'ny ao an-toerana izy ireny… ; Fa inona no nataontsika ? Tsy nanao na inona na inona isika [hampitsaharana azy io] ? Sivilizasiôna, fitondrantena, hatsaràm-panahy, lanjan'ny aina, akaiky kokoa sa lavitra kokoa antsika izy ireny ? Fa aoka isika hitadidy an'izany. Fandripahana sy andro iray mihoson-drà ary tanàna iray nahavita heloka !!!
Meiri Maogou Youyue nitomany ho an'ireo alika hovonoina noho io fombandrazana io :
Ny 21 Jona, androany ny #fetibe fihinanana hena alika ao Yulin Lizhi no misokatra. An'arivony maro ireo aina ho aripaka androany! Ho tondraka rà ilay tanàna tsy misy fitiavana ao Yulin ! Ho fantatra tsara manerana izao tontolo izao ny “laza tsaran'i” Yulin ! Androany isika tsy hanao afa-tsy ny handrehitra lahinjiro ho an'ireo alika an'arivony maro ho aripaka androany.
Xiaoying Tongxue dia nanana fomba fijery somary nihataka kely tamin'izany, raha nanoratra fa tsy voatery ho ratsy ny fihinanana hena alika, fa ilay fomba famonoana feno habibiana no ratsy:
Tena tapakevitra ny tsy hihinana hena alika intsony aho, nefa tsy hanakiana velively koa izay manao izany, samy manana ny tiany ny tsirairay, rehefa tsy manitsakitsaka ny lalàna ianao, tsy azonao atao ny miteny hoe ratsy [ny fihinanana hena alika], antenaiko [fotsiny] fa mba hampiseho ny toetra maha-olona ny fomba entina mamono ireo alika.